Guddoomiye Jawaari oo la sheegay inuu waddanka Turkiga degi doono – Madal Furan
Hoy > Warka > Guddoomiye Jawaari oo la sheegay inuu waddanka Turkiga degi doono
Guddoomiye Jawaari oo la sheegay inuu waddanka Turkiga degi doono
Editor April 9, 2018 Warka 0
Muqdisho (Madal Furan) – Iyadoo uu Guddoomiyihii hore ee Baarlamaanka DFS Maxamed Sh. Cumaan Jawaari oo bartiisa Facebooga ku caddeeyey sababta uu isu casilay oo ku yiri “waxaan garwaaqsaday inta ay burburi laheyd dowladda Soomaaliya in aan iska casilo xilka aan u hayey Golaha Shacabka”.
Warar hoose oo ay helayso Madal Furan ayaa sheegaya in kulankii saacadaha badan xalay gelinkii danbe ka socday Madaxtooyadda Soomaaliya Guddoomiye Jawaari looga aqbalay shuruudo badan oo uu ku xiray iscasilaadiisa.
Ma jirto faahfaahin dheeraad ah oo shuruudahaas ka soo baxay, waxaase ilo Madaxtooyadda u dhow dhow ay Madal Furan u sheegeen in Gudoomiyihii hore ee Baarlamaanka ay dowladda Turkigu aqbashay inay siiso degenaasho inta ka harsan noloshiisa.
Waxaa kaloo soo baxaya warar sheegaya in Guddoomiye Jawaari uu isu diyaarinayo inuu maalinimada Arbacada 11 bishan Abril uu khudbadiisii ugu danbeysay u jeedin doono Golaha Baarlamaanka DFS.
Qarax lala eegtay Ciidamada AMISOM iyo Al-shabaab oo sheegatay masuuliyadda.
Daawo Kulankii Xilka looga qaaday Taliyaha Booliska iyo Agaasimaha Sirdoonka Qaranka
Xukuumada Soomaaliya oo markii ugu horeysay ka shirtay maqaamka caasimadda Muqdisho.